Ndeapi Akanakisisa Hotels kuPuerto Rico?
Nhamba yangu yehotera yepamusoro muPuerto Rico inofunga; kunyanya kushushikana uye zvaunofarira, zviitiko zvinoshamisa, kudya kwakanakisisa uye kunyanya kubasa basa revanhu vose vakaita basa pane zvandakapedzisira ndichida (kana kusavhiringidza). Zvinyorwa zvakarongwa pasi apa zvinotangira kubva kune dzimba dzematombo kusvika kune zvitsuwa zvinotapira, kubva pakusvibiswa kuti zvive zvisingakoshi, uye kubva kumhenderekedzo kusvika kune zvitsuwa.
Mufananidzo © Zain Deane
Kutungamira iyo pack kwandiri ini nzvimbo inosanganisira zvose zvandinoda muhotera:
Dzimba dzeplate dzakagadzirwa zvakanaka (marambi eMoroccan, dorox-style-style layout ye suite ndakagara, dzimba dzokugezera dzakanaka, padziva rega)
Nzvimbo isingakanganwiki (yakakonzerwa pamucheto weRincón's pristine beachfront)
Ihwo hwepedyo hwebasa rekutengesa
Inonyanya kushandiswa nevatengi
Iyo "kupukunyuka-kubva-iyo-yose" manzwiro, ayo Horned Dorset ari nani pane dzimwe nzvimbo muPuerto Rico
Ndine ruzivo rwakanyanya pano nokuti hanzvadzi yangu yakanga yakaroora paEl Convento, asi izvozvo hazvichinje chokwadi chokuti hotera yakabatsira kuti iite imwe yemishonga yemagetsi uye isingakanganwiki yandakaenda. Chinhu chakanakisisa pamusoro pepfuma yepamusoro, iyo yekare yakasangana yakadzorerwa uye yakachengetedzwa zvakanaka, ndiyo iyo inochengetedza mweya weChembera San Juan uchiri mupenyu.
Kuti ugare pano ndechokuti uzvichenese zvachose murudo rworudo rweguta rekare. Nzvimbo dzekugara dzinochengetedza chiyero ichi pachinenge chichipa zvinhu zvose kune vaenzi vayo, uye hotera dzehotera yose isarudzo dzakasimba (Ndinonyanya kuda tapas kuEl Picoteo inotarisana neguva remashizha).
El Convento inzvimbo yakasiyana uye nzvimbo yakanakisisa yekugara mu Old San Juan.
The W Akanaka
Mufananidzo © W Vieques
Zvinyorwa zvisiri izvo, mufananidzo W unofadza. Hapana chakafanana naro paViqueque Island uye zvishomanana kuenzanisa nayo nechekuchamhembe. Chii chinoita kuti zvive zvakakosha?
Kune rimwe, pane chimiro, icho chinoratidza humbozha hwekugara kwechiwikidzi. Zvokushongedza zvemazuva ano zvinonaka uye zvitsuwa-chic uye zvinosvibisa hupenyu hwakanaka. Makamuri acho makuru, minimalist, uye akasiyana siyana, uye mapatya maviri asingaverengeki ari pamberi pegungwa anogadzira zuva rokuzorora, rinopedza zuva.
Zvadaro pane nzvimbo yekudyira, Alain Ducasse-akafuridzirwa MiX paGungwa, iyo inobva pane zvakanyanya kuoma 'Kubika kweRican kuti ipe eclectic Mediterranean mharidzo iyo inofadza uye inonaka. The spa's W ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisisa muPuerto Rico , uye mabheti ayo anopa hutano hwezuva hunoputika nokuda kwevakashanyira.
Iko kunotambira kuEl San Juan Hotel. Mufananidzo © Zain Deane
Kana El El Convento inotora chinyorwa chekare cheSan Juan , ipapo El San Juan Hotel inogadzira kubwinya kwayo kwemazuva. Imba kuenda kune yepakutanga Rat Pack muma1960, izvi zvakagadziriswa pfuma yakaona urongwa hunoshamisa hweA-listers huripo nanhasi.
Imwe yemazuva ano yemazuva ano inotarisana nevekugara pakarepo yakasimudzira hotera yacho nyaradzo, asi ndiyo nzvimbo dzepaguru dzinoita kuti dzive dzakakosha kwandiri. Nzvimbo dzisina nguva dzisingabhadharwi, imwe yemakasinoni anonyanya kupisa pachitsuwa chacho, kambani yakanakisisa yeguta, uye nzvimbo yakasununguka yeIsla Verde mhenderekedzo yepamusoro inoratidzika zvakakurumbira kwete chete kwevatenzi vehotera asi vekune imwe nzvimbo nevashanyi zvakafanana.
Pakupedzisira, hotera iyi ndeimwe yevashomanana muSan Juan vane kutenga kwakakwana uye yekudya, inotungamirirwa neresitorendi yeKoco's Caribbean-fusion.
The Hix Island House
The Triangle Building kuHix Island House. Mufananidzo © Zain Deane
Ndinofanira kuisa gango pano; apo ini ndichifunga kuti W ndiyo hoteli yakanakisisa muVique, iyo inondida ndiyo Hix Island House . Chikonzero chekuti W inotanga kutanga ndeyekuti inopa zvakawanda kune vaenzi vayo uye inokumbira kune boka rakakura.
Asi Hix chimwe chinhu zvachose chiri kunze kwebhokisi. Zvisikwa zvomugadziri John Hix, hotera yacho yakazara nedzimba dzematombo dzinoita seinobuda kubva pasi. Imwe hoteli yakanyanya kunyatsozivikanwa muPuerto Rico, Hix inoshandisa mahwindo egirazi, kwete a / c, uye hapana chlorine muhombe yekushambira. Zvose zviri pano zvine ruvara rwehutu kune iyo, asi mhedzisiro yese haisi imwe yekunakisa eco-style, asi pane kududzirwa kwakasiyana kwekunyaradzwa kwe boutique.
Hix ndiyo iyo nzvimbo yaunoda kana kuvenga. Zvinonzwisisika, ini ndiri zvose pamusoro pezvaimbove.
Nokuda kwezvinhu zvakanaka, haugoni kukunda El Conquistador Resort & Golden Door Spa. Hapana mumwezve pachitsuwa ichi anogona kukanda kunze kwezvinhu izvi zvinoshamisa zvezvinhu uye zvinobatsira:
Championship golf golf
Spa inokunda mubayiro
Mabasa emvura kubva pakushamba kwemvura kuenda kune hove
Imwe- kune vatatu-dzimba dzekurara
Kutengesa motokari yemakadhi
Sleek uye maratidziro, La Concha Renaissance yakadzoka zvakare seimwe yehotera dzeSan Juan dzakanyanyisa. Nemahombekombe emazuva ano-kupisa kwakanaka, nzvimbo huru yekuchengetedza, uye nzvimbo yekudyira, uye kugungwa kunopinda muCloado, yava imwe yenzvimbo dzakapoteredza nzvimbo, dzinofarirwa nevashanyi uye vagari vemo.
Kunyange zvazvo nzvimbo dzose dzekugara dzakakura uye dzakasarudzwa zvakanaka, makamuri e Suite Towers ndiyo nzira yekuenda kuLa Concha kana uchida kupararira uye kuvhara muhombekombe yegungwa. Kunyanya, nekutengesa kakawanda uye huwandu hunotangira pasi pe $ 200 neusiku, inobvumirana nehutano hwaunowana.
Mufananidzo © Conrad Condado Hotel
IConrad yakagadziriswa zvachose, uye mhinduro yacho inotyisa. Zvichida zvakakosha kupfuura mamwe mahotera pane urongwa urwu, zvakadaro unokupa makamuri makuru, akasununguka muCaribbean yemazuva ano, casino, terrific lobby lounge, uye - zvikonzero zviviri zvekuda nzvimbo ino - mbiri dzezvitsuwa zvandinoda chaizvo muPuerto Rico: iyo yakakurumbira Pikayo uye iyo inowanzoita Varitas, nemudzidzisi mukuru Wilo Benet.
Kanda munzvimbo inofadza dziva uye kugungwa, uye Conrad inopa zvakawanda zvakakwana pamutengo.
Mufananidzo © Wyndham Rio Mar
Nenguva yandakafamba nayo kubva kuRio Mar Beach Resort & Spa, muWest Wyndham Grand Resort, ndanga ndanzwa zvakanaka. Mushure mechikamu chakanakisisa paMandara Spa , kudya kwakanakisisa kwakanakisa kuPaoo, kunyorera kwayo kwakanaka kweItaly, nekufambidzana neHacienda Carabali iri pedo, zvakanga zvakaoma kusafamba nekunyemwerera pachiso changu.
Uye izvi hazvitauri serene beach, gorofu, chikwata chevana, nedzimwe mabiko. Vashandi vehotera yacho inoshamisa, uye makamuri ari kukukoka. Iripo pakati peSan Juan neFajardo, iRio Mar inokutorera kure neguta reguta uye inokukoka iwe kuti uwane rutivi rwakanyanyisa, rwakasununguka rwePuerto Rico.
Mufananidzo © Chateau Cervantes
Handigoni kubatsira; Ndinoda mahotela e-boutique . Kufarira, hukama hwepedyo, uye zvigunhu zvemunhu oga ndizvo zvinondifadza kana ndiri muzororo. Uye Chateau Cervantes ndezvose pamusoro pezvinhu izvi zvinoshandiswa ne boutique. Chinyorwa chiduku-rose chinowanikwa muRecinto Sur Street mu Old San Juan uye inopa makamuri akaisvonaka akashongedzwa nemafashoni emunharaunda yeNono Maldonado, nzvimbo inotyisa yePanza, uye mharidzo yaDon Quixote iyo chero munyori angada. Kana iwe uchida rudo, hunovanzika-mu-pachena-maziso ekudzoka ayo anopa kukurumidza kupukunyuka, Cervantes achaita kuti iwe unyemwe.
A Weekend kuCulebra Island
Wow Surfing Chikoro muSan Juan, Puerto Rico
Funga kuti Puerto Rico Iyo Iga Gilligan's Island
Ratidza Karenda Yako: Major Festivals uye Mazororo muPuerto Rico
December Calendar ye Zviitiko muPuerto Rico
Chii chinonzi Stinky Tofu?
Nashville's Hot Chicken Smackdown: Prince vs. Hattie B's
Inowanzowanzoita sei Hurricane Hit Florida?
Mashandisiro Aungaita Mazano Ako Uye Miles Paunenge Uchitenga Minute Yokupedzisira
Mutoro Wakavhara Utsi Inopa Rugare rwepfungwa kune vafambi
June Mhemberero, Mhemberero uye Zviitiko Zvinokosha
Iwe Unofanirwa Kuvakira Imba Sitter?
Mugwagwa Mugwagwa Pasi US Route 90 muTexas
Tsvaga Kunze Kwemvura uye Kunze Kwemvura Para muMichigan
Mhuri-Shamwari Pamusoro peHiwi Island Guru
Mutungamiri kuMichigan Gay Pride
India Kufamba: Nhaurirano Unofanira Kuziva paVatariri Vakanyanya Kudunhu
Pane Zip Line Kubva Eiffel Tower Parizvino